Somaliland: Ma Cad Itoobiyana Ka Yimi Aan Soo Gaadhin Baa Jira? Cali Guray Galay Xukuumadda - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Ma Cad Itoobiyana Ka Yimi Aan Soo Gaadhin Baa Jira? Cali...
Mujaahid Cali Yuusuf Cali Guray Oo Si Yaro Sarbaaban Uga Hadlay Xukuumadda Somaliland Somaliland Ee Dekedda Itoobiayah
MA CAD ITOOBIYANA KA YIMI SOMALILANDNA AAN SOO GAADHIN BAA JIRA?
Miskiin Afhayeenka Madaxtooyada iyo ciddii hadal tidhiba waxay isku qireen jahliga haysta. Malaha ma ogaba afka uu ku hadlayay ee hadda warka Dr. Sacad beeniyay inu ahaa kii Madaxwaynaha Jamhuuriyadda Somaliland. Runtii waa ayaan darro sideeda u taal iyo tabaalaha aduun taynu aragnaa.
Anigu uur-ku-baale ma ahayn wararkii is wada burinayay waxaan ahayna maan haynin lakiin waxan hubay in DP World ay mar kasta yeelanaysay codka tirada badan marka ay tahay saami qaybsiga. Miyaanay sidii noqon oon Dr Sacad warkii Afhayeenka Madaxtooyadana beenin kaygii qiyaasta caqliga uun ahaana u marag furin. Caalamka marka masuul xil qaran hayaa been sheego ey ku cadaato inu been sheegay markaas ayuu halkaa isku casilaa lakiin inta badan waa kuwa aan muslinka ahayn lakiin waa nasiib darro in Madaxda muslinka ee og in Ilaahay ugu neceb yahay beenaalahu ay hadana beenaalayaal noqdaan. Runta inta runta necebi haday kugu nacdo Ilaahay ayaa kugu jeclaan. Jacaylka beenaalaha beenta jecel iyo Allah khaaliqa ah qofba kuu jecel yahay ayuu jacaylkiisa doortaa. Alxamdulillah Ilaahow adiga ayaan kaa magan galay been iyo in aan noqdo beenaalaha aad ugu neceb tahay inta aad abuurtay oo dhan.
Sua’aasha aniga weli iga dhiman eenan haynin jawaabteedu waxay tahay 35% saamigii hore ahaa wuxu ku qiimaysnaa dekeddeenu hadda sida ay tahay. Hadii Itoobiya ay maalgashigeedu noqonayo 19% Somaliland waxay u celisay 5% ku jira saamigeeda? Lakiin ilaa hadda lama sheegin halka ay martay? 4200 000 inta ay 5% ka noqonaysaa lacag yar maaha ee ma cad Itoobiyana ka yimi Somalilandna aan soo gaadhin baa jira?